မိခင်အိုကို သားအရင်းကိုယ်တိုင်က အတင်းတောင်းရမ်းစားသောက်ခိုင်းပြီး ငွေရှာနေခဲ့တဲ့အဖြစ် – Maythadin
မိခင်အိုကို သားအရင်းကိုယ်တိုင်က အတင်းတောင်းရမ်းစားသောက်ခိုင်းပြီး ငွေရှာနေခဲ့တဲ့အဖြစ်
May Thadin | November 20, 2020 | International News | No Comments
မိခင်အိုကို သားအရင်းကိုယ်တိုင်က အတင်း တောင်းရမ်းစားသောက်ခိုင်းပြီး ငွေရှာနေခဲ့တဲ့ အဖြစ်ခေတ်ကာလကြီးဟာ တဖြည်းဖြည်းဆိုးရွားလာပြီးတော့ မိဘတွေဆီခိုကပ်စားသောက်နေကြတဲ့ သားသမီးတွေသာမက ၊ အချို့ဆိုရင် မသန်မစွမ်းတော့တဲ့ မိဘတွေကိုအသုံးချပြီးငွေရှာနေကြတဲ့ ရုပ်ညံ့လွန်းတဲ့ သူတွေလည်းရှိလာပါတယ်နော်။ယခု တစ်ခေါက်မှာလည်း မလေးရှားနိုင်ငံ ၊
???? မြို့ရှိ လူစည်ကားတဲ့စားသောက်ဆိုင်တွေမှာ လှည့်ပတ်ပြီးတောင်းရမ်းနေကြတဲ့ အဘွားအိုတစ်ယောက်ကို ?????? ??? အမည်နဲ့ ???????? အသုံးပြုသူတစ်ယောက်က ?????? ????? ပေါ်မှာဝေမျှခဲ့တာပါ။ အဘွားအိုနဲ့ သူမရဲ့အသက်အရွယ်နဲ့ မလိုက် ထော့နင်ထော့နင်လမ်းလျှောက်နေခဲ့ပြီးတော့ စားသောက်ဆိုင်ထဲမှစားပွဲဝိုင်းတွေဆီ တစ်ဝိုင်းပြီးတစ်ဝိုင်းရွေ့ကာ
တောင်းရမ်းခဲ့တာပါ။သူမဟာ ပလပ်စတစ်ခွက်လေးကို ကိုင်ဆောင်ထားပြီးတော့ ခွက်ထဲမှာတော့ သူမလှည့်ပတ်ပြီး တောင်းရမ်းထားခဲ့တဲ့ ငွေစက္ကူ လေး အနည်းငယ်ရှိနေခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမယ့်လည်း ဘယ်သူမှ မထင်ထားလောက်အောင် အတော်လေးဆိုးဝါးလွန်းတဲ့အဖြစ်ကတော့ ကျန်းမာသန်စွမ်းတဲ့လူလတ်ပိုင်းအမျိုးသားတစ်ယောက် (အဘွားအိုရဲ့ သားလို့ယူဆရသူ) ဟာ
အဘွားအိုတောင်းရမ်းလို့ရရှိလာတဲ့ ငွေတွေကို ယူဆောင်ဖို့ စားသောက်ဆိုင်အပြင်ဖက် မှာ စောင့်နေခဲ့ပြီးတော့ သူမဆီမှပိုက်ဆံများကို အကုန်ယူဆောင်သွားခဲ့တာပါ။ထိုအဖြစ်အပျက်ဟာ ?????? ????? ပေါ်မှာ အတော်လေးရေပန်းစားခဲ့ပြီးနောက် လူအများစုကလူအိုကို
အသုံးချပြီး ပိုက်ဆံရှာနေတဲ့ ကျန်းမာသန်စွမ်းတဲ့အဆိုပါအမျိုးသားရဲ့လုပ်ရပ်ကို အတော်လေး ရွံရှာသွားခဲ့ကြတာပါ။ အဆိုပါအမျိုးသားကတော့ အလုပ်လက်မဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရတဲ့အပြင်ကိုအခြားနောက်ဆက်တွဲအခြေအနေကိုတော့ ဖော်ပြထားခြင်းမရှိပါဘူးနော်။
မိခငျအိုကို သားအရငျးကိုယျတိုငျက အတငျး တောငျးရမျးစားသောကျခိုငျးပွီး ငှရှောနခေဲ့တဲ့ အဖွဈခတျေကာလကွီးဟာ တဖွညျးဖွညျးဆိုးရှားလာပွီးတော့ မိဘတှဆေီခိုကပျစားသောကျနကွေတဲ့ သားသမီးတှသောမက ၊ အခြို့ဆိုရငျ မသနျမစှမျးတော့တဲ့ မိဘတှကေိုအသုံးခပြွီးငှရှောနကွေတဲ့ ရုပျညံ့လှနျးတဲ့ သူတှလေညျးရှိလာပါတယျနျော။ယခု တဈခေါကျမှာလညျး မလေးရှားနိုငျငံ ၊
???? မွို့ရှိ လူစညျကားတဲ့စားသောကျဆိုငျတှမှော လှညျ့ပတျပွီးတောငျးရမျးနကွေတဲ့ အဘှားအိုတဈယောကျကို ?????? ??? အမညျနဲ့ ???????? အသုံးပွုသူတဈယောကျက ?????? ????? ပျေါမှာဝမြှေခဲ့တာပါ။ အဘှားအိုနဲ့ သူမရဲ့အသကျအရှယျနဲ့ မလိုကျ ထော့နငျထော့နငျလမျးလြှောကျနခေဲ့ပွီးတော့ စားသောကျဆိုငျထဲမှစားပှဲဝိုငျးတှဆေီ တဈဝိုငျးပွီးတဈဝိုငျးရှကေ့ာ
တောငျးရမျးခဲ့တာပါ။သူမဟာ ပလပျစတဈခှကျလေးကို ကိုငျဆောငျထားပွီးတော့ ခှကျထဲမှာတော့ သူမလှညျ့ပတျပွီး တောငျးရမျးထားခဲ့တဲ့ ငှစေက်ကူ လေး အနညျးငယျရှိနခေဲ့ပါတယျ။ဒါပမေယျ့လညျး ဘယျသူမှ မထငျထားလောကျအောငျ အတျောလေးဆိုးဝါးလှနျးတဲ့အဖွဈကတော့ ကနျြးမာသနျစှမျးတဲ့လူလတျပိုငျးအမြိုးသားတဈယောကျ (အဘှားအိုရဲ့ သားလို့ယူဆရသူ) ဟာ
အဘှားအိုတောငျးရမျးလို့ရရှိလာတဲ့ ငှတှေကေို ယူဆောငျဖို့ စားသောကျဆိုငျအပွငျဖကျ မှာ စောငျ့နခေဲ့ပွီးတော့ သူမဆီမှပိုကျဆံမြားကို အကုနျယူဆောငျသှားခဲ့တာပါ။ထိုအဖွဈအပကျြဟာ ?????? ????? ပျေါမှာ အတျောလေးရပေနျးစားခဲ့ပွီးနောကျ လူအမြားစုကလူအိုကို
အသုံးခပြွီး ပိုကျဆံရှာနတေဲ့ ကနျြးမာသနျစှမျးတဲ့အဆိုပါအမြိုးသားရဲ့လုပျရပျကို အတျောလေး ရှံရှာသှားခဲ့ကွတာပါ။ အဆိုပါအမြိုးသားကတော့ အလုပျလကျမဲ့လူတဈယောကျဖွဈကွောငျး သိရှိရတဲ့အပွငျကိုအခွားနောကျဆကျတှဲအခွအေနကေိုတော့ ဖျောပွထားခွငျးမရှိပါဘူးနျော။
Rooftopperတဈယောကျရဲ့ စတနျ့ပွရငျး အထပျမွငျ့အဆောကျအအုံပျေါက ပွုကသြှားခဲ့ရတဲ့ ဗှီယိုဖိုငျ